Ukwenza Ukhetho Lobulumko Ngoxa Uselula | Funda
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCambodia IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMoore IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOromo IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
‘Nina bafana kwanani zintombi ezinyulu, lidumiseni igama likaYehova.’—INDU. 148:12, 13.
Yintoni enokwenziwa lulutsha ngoku ukuze lunandiphe amathuba enkonzweni kaYehova kamva?
Olunye ulutsha lumkhonze njani uYehova?
Yiyiphi imigaqo yeBhayibhile enokukunceda wenze olona khetho lufanelekileyo?
1. Ngawaphi amathuba ananditshwa ngamaKristu aselula?
SIPHILA kumaxesha abangel’ umdla. Ngoku izigidi zabantu bazo zonke iintlanga ziyathontelana ukungena kunqulo lokwenyaniso, kunanini na ngaphambili. (ISityhi. 7:9, 10) Ulutsha oluninzi luvuyiswa kukunceda abanye baqonde iBhayibhile. (ISityhi. 22:17) Lumbi luqhuba izifundo zeBhayibhile, lunceda abantu baphucule ubomi babo. Olunye lushumayela ngenzondelelo kwintsimi ethetha ulwimi lwasemzini. (INdu. 110:3; Isa. 52:7) Unokwenza njani ukuze ube nenxalenye kulo msebenzi wanelisayo?
2. Umzekelo kaTimoti ubonisa njani ukuba uYehova ukulungele ukunika abaselula iimbopheleleko? (Jonga umfanekiso osekuqaleni.)
2 Njengomntu oselula, unokwenza ukhetho oluya kukuvulela amathuba onokuwanandipha enkonzweni kaThixo. Ngokomzekelo, uTimoti waseListra wenza ukhetho lobulumko nolwamkhokelela ekubeni abe ngumthunywa wevangeli xa wayemalunga neminyaka eyi-20. (IZe. 16:1-3) Kwiinyanga kamva, emva kokuba inkcaso ekrakra imnyanzele ukuba ashiye ibandla laseTesalonika elalisandul’ ukusekwa, uPawulos wacela uTimoti oselula ukuba abuyele eTesalonika ukuze omeleze abazalwana. (IZe. 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6) Unokuyithelekelela indlela amele ukuba wayevuya ngayo uTimoti akufumana eso sabelo.
OLONA KHETHO LUBALULEKILEYO
3. Sisiphi esona sigqibo sibalulekileyo onokusenza ebomini, ibe unokusenza nini?
3 Ixesha lobutsha lelona lifanelekileyo lokwenza izigqibo ezibalulekileyo. Kodwa kukho isigqibo esibaluleke ngaphezu kwazo zonke—esokukhonza uYehova. Liliphi elona xesha lifanelekileyo lokwenza eso sigqibo? UYehova uthi: “Khumbula uMdali wakho Ozukileyo ngemihla yobufana bakho.” (INtshu. 12:1) Ekuphela kwendlela eyamkelekileyo ‘yokukhumbula’ uYehova kukumkhonza ngokupheleleyo. (Dut. 10:12) Isigqibo sokukhonza uThixo ngentliziyo yakho yonke sesona sibalulekileyo konokuzenza. Siya kuchaphazela ubomi bakho bonke.—INdu. 71:5.
4. Ziziphi ezinye izigqibo ezibalulekileyo eziya kuchaphazela indlela omkhonza ngayo uThixo?
4 Kakade ke, isigqibo osenzayo sokukhonza uYehova asikokuphela kokhetho oluchaphazela ikamva lakho. Ngokomzekelo, usenokucinga enoba uza kutshata kusini na, uza kutshata nabani, nendlela oza kuziphilisa ngayo. Nazo ezi zizigqibo ezibalulekileyo, kodwa kuya kuba bubulumko ukugqiba enoba ufuna ukukhonza uYehova kangangoko unako kusini na. (Dut. 30:19, 20) Ngoba? Kuba zonke ezi zigqibo zihlobene. Loo nto ugqiba kuyo ngokuphathelele umtshato nengqesho iya kuchaphazela indlela omkhonza ngayo uThixo. (Thelekisa uLuka 14:16-20.) Kwelinye icala, umnqweno wakho wokukhonza uThixo uya kuchaphazela ukhetho olwenzayo ngomtshato nomsebenzi. Ngoko ke, gqiba ngezona zinto zibaluleke ngakumbi.—Fil. 1:10.
UZA KWENZA NTONI NGOBUTSHA BAKHO?
5, 6. Amazwi kaYuichiro abonisa njani ukuba ukwenza ukhetho olufanelekileyo kukhokelela kumava amnandi kamva? (Funda inqaku elithi “Ukhetho Endalwenza Ndisemncinane” kule Mboniselo.)
5 Emva kokuba wenze ukhetho lokukhonza uThixo, uya kukuqonda oko afuna ukwenze, uze ke wenze isigqibo ngendlela oza kumkhonza ngayo. Omnye umzalwana waseJapan wathi: “Ndiseneminyaka eyi-14, ndaphuma nomnye umzalwana entsimini owaqaphela ukuba ndandingayinandiphi. Wathi kum: ‘Yuichiro, mhlawumbi kuya kuba bhetele ukuba ukhe ugoduke, uze ufike uhlale phantsi ucingisise nzulu ngezinto akwenzele zona uYehova.’ Ndenza kanye oko. Eneneni, ndaqhubeka ndicinga yaye ndithandaza kangangeentsuku. Ngokuthe ngcembe, isimo sam sengqondo satshintsha. Kungekudala, ndafumanisa ukuba ndiyakunandipha ukukhonza uYehova. Ndandikuthanda ukufunda ngabathunywa bevangeli, ibe ndaqalisa ukucinga ngokukhonza uYehova ngakumbi.”
6 UYuichiro uqhubeka athi: “Ndagqiba kwelokuba ndenze ukhetho oluya kundivumela ukuba ndikhonze uYehova phesheya kweelwandle. Ngokomzekelo, ndafunda isiNgesi. Ukugqiba kwam esikolweni, ndakhetha ukuzixhasa ngokumane ndifundisa abantu isiNgesi, ukuze ndikwazi ukuqhubeka ndinguvulindlela. Xa ndandineminyaka eyi-20, ndaqalisa ukufunda isiMongolia ndaza ndafumana ithuba lokuya kutyelela iqela elalinabavakalisi abathetha isiMongolia. Emva kweminyaka emibini, ngo-2007, ndaya kutyelela eMongolia. Ngoxa ndandishumayela nabanye oovulindlela ndaza ndabona ukuba abantu abaninzi babenxanelwe inyaniso, ndaba nomnqweno wokufudukela apho ndiye kunceda. Ndabuyela eJapan ndisiya kwenza amalungiselelo okuphindela apho. Ndibe nguvulindlela eMongolia ukususela ngoAprili 2008. Ewe kona akululanga apha. Kodwa abantu bayasabela kwiindaba ezilungileyo, ibe nam ndiyakwazi ukubanceda basondele kuYehova. Ndivakalelwa kukuba ndakhetha eyona ndlela ibhetele yokuphila.”
7. Luluphi ukhetho esimele silwenze, ibe uMoses wasimisela wuphi umzekelo?
7 Ngqina ngalinye likaYehova limele ligqibe ngendlela eliza kubuchitha ngalo ubomi balo enkonzweni kaYehova. (Yosh. 24:15) Akukho mntu umele akuxelele ukuba utshate okanye ungatshati, utshate nabani, okanye ufune wuphi umsebenzi. Ngaba uza kukhetha umsebenzi ongazukuchitha xesha lininzi uwufundela? Bambi kuni lutsha olungamaKristu bahlala kwiindawo ezitsala nzima; abanye kwizixeko ezifumileyo. Anifani ngobuntu, ubuchule, amava, izinto eninomdla kuzo nangokholo. Oku kungafani kunokuthelekiswa nendlela ulutsha lwamaHebhere awayehlala eYiputa olwalahluke ngayo kuMoses. Eselula uMoses wayevulekelwe ngamathuba amaninzi, ngoxa amanye amaHebhere ayengamakhoboka. (Eks. 1:13, 14; IZe. 7:21, 22) Nabo babephila kumaxesha abangel’ umdla, kanye njengani. (Eks. 19:4-6) Ngamnye kwakufuneka akhethe ukuba uza kwenza ntoni ngobomi bakhe. UMoses wenza ukhetho olufanelekileyo.—Funda amaHebhere 11:24-27.
8. Ngoobani abanokukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo?
8 UYehova uyakunceda wenze ukhetho lobulumko ebutsheni bakho. Ukufundisa ngemigaqo yeBhayibhile onokuyisebenzisa enoba ukweyiphi na imeko. (INdu. 32:8) Ukongezelela koko, abazali bakho abangamaKristu nabadala bebandla banokukunceda uqiqe ngendlela oya kuyisebenzisa ngayo le migaqo. (IMize. 1:8, 9) Makhe sithethe ngemigaqo yeBhayibhile emithathu enokukunceda wenze ukhetho olufanelekileyo noluya kukunceda kwikamva.
IMIGAQO YEBHAYIBHILE EMITHATHU ENOKUKUNCEDA
9. (a) UYehova usinike njani inkululeko yokuzikhethela? (b) ‘Ukufuna kuqala uBukumkani’ kusivulela waphi amathuba?
9 Funa kuqala uBukumkani bukaThixo nobulungisa bakhe. (Funda uMateyu 6:19-21, 24-26, 31-34.) UYehova usinike inkululeko yokuzikhethela. Akatsho ukuba lingakanani ixesha omele ulichithe ushumayela ngoBukumkani. Kodwa uYesu wasinika lo mgaqo uluncedo wokuba sibeke uBukumkani kuqala. Uya kuvulekelwa yiminyango emininzi, ukuba ubeka uBukumkani kwindawo yokuqala. Ngokomzekelo, uya kuba nethuba lokubonakalisa indlela omthanda ngayo uYehova nommelwane nokubonisa umbulelo wakho kuye ngethemba lobomi obungunaphakade. Ngaba izigqibo ozenzayo ngomtshato nomsebenzi zibonisa ukuba uxhalabele izinto eziphathekayo kunokufuna kuqala ubukumkani nobulungisa bakhe?
10. Yintoni eyayisonwabisa uYesu, ibe ziziphi izigqibo eziya kukonwabisa?
10 Fumana uyolo ngokukhonza abanye. (Funda iZenzo 20:20, 21, 24, 35) UYesu wasifundisa lo mgaqo usisiseko. Wayonwabe kakhulu ngenxa yokuba wayesenza intando kaYise kungekhona eyakhe. Wayeyoliswa kukubona abantu abalulamileyo besabela kwiindaba ezilungileyo. (Luka 10:21; Yoh. 4:34) Mhlawumbi sele ulufumene olu vuyo lokunceda abanye. Ukuba usekela izigqibo zakho kwimigaqo eyafundiswa nguYesu, uya konwaba kungekuphela nje wena kodwa noYehova.—IMize. 27:11.
11. Yintoni eyenza uBharuki akakunandipha ukukhonza uYehova, ibe uYehova wamnceda njani?
11 Olona lonwabo silufumana xa sikhonza uYehova. (IMize. 16:20) Kuyabonakala ukuba uBharuki, unobhala kaYeremiya wakulibala oku. Ngaxa lithile, wayengasakunandiphi ukukhonza uYehova. UYehova wathi kuye: “Uyaqhubeka uzifunela izinto ezinkulu. Musa ukuqhubeka uzifuna. Kuba yabona, ndiyizisela intlekele inyama yonke, . . . yaye ndiza kukunika umphefumlo wakho ube lixhoba kuzo zonke iindawo osenokuya kuzo.” (Yer. 45:3, 5) Ucinga ukuba yintoni eyayinokwenza uBharuki onwabe—kukuzifunela izinto ezinkulu okanye ukusinda xa kwakutshatyalaliswa iYerusalem?—Yak. 1:12.
12. Luluphi ukhetho olwamzisela uvuyo uRamiro?
12 Omnye umzalwana owafumana uvuyo ekukhonzeni abanye nguRamiro. Uthi: “Ndiphuma kwintsapho ehluphekayo kummandla okwiiNtaba zeAndes. Xa umkhuluwa wam wathi uza kundisa eYunivesithi, yaba yinto enkulu leyo. Kodwa ke ndandisandul’ ukubhaptizwa ndisiba liNgqina likaYehova, ibe ndandicelwe ngomnye uvulindlela ukuba ndishumayele naye kwenye idolophu encinane. Ndaya kuloo dolophana, ndafunda ukucheba iinwele ndaza ndazivulela ishishini ukuze ndizixhase. Abantu babezixabisa iZibhalo esibafundisa zona. Kamva, ndangena kwibandla elalisandul’ ukusekwa lolwimi lwasekuhlaleni. Ngoku sekudlule iminyaka elishumi ndingumshumayeli wexesha elizeleyo. Awukho omnye umsebenzi obunokundinika uvuyo olufana nolu lokunceda abantu beve iindaba ezilungileyo ngolwimi lwabo.”
URamiro ebesoloko onwabile enkonzweni kaYehova ukususela ebutsheni (Funda isiqendu 12)
13. Kutheni eli ilelona xesha lifanelekileyo lokukhonza uYehova ngentliziyo yakho yonke?
13 Fumana uvuyo ngokukhonza uYehova ebutsheni bakho. (Funda iNtshumayeli 12:1.) Musa ukuvakalelwa kukuba kufuneka uqale ufumane umsebenzi ohlawula kakuhle ngaphambi kokuba ube nguvulindlela. Elona xesha lifanelekileyo lokukhonza uYehova ngentliziyo yakho yonke leli, ngaphambi kokuba ube neembopheleleko zentsapho. Usesempilweni yaye unamandla okwenza izabelo ezinzima. Ufuna ukumenzela ntoni uYehova ngoku usemtsha? Mhlawumbi unosukelo lokuba nguvulindlela. Ufuna ukusebenza kwintsimi ethetha ulwimi lwasemzini. Okanye mhlawumbi unokwenza okungakumbi kwibandla okulo. Enoba ufuna ukwenza ntoni na enkonzweni kaThixo, kuza kufuneka ube nendlela yokuziphilisa. Uza kufuna uqeqesho olungakanani? Uza kukhetha ntoni?
SEBENZISA IMIGAQO YEBHAYIBHILE UKUZE UKHETHE NGOBULUMKO
14. Ziziphi izinto omele uzilumkele xa ufuna umsebenzi?
14 Le migaqo mithathu yeBhayibhile sithethe ngayo inokukunceda xa ukhetha umsebenzi. Ngokuqinisekileyo ootitshala okanye amasebe karhulumente ayayazi imisebenzi ekhoyo kwingingqi yakho okanye kuloo ndawo ufuna ukuba nguvulindlela kuyo. Inkcazelo onokuyifumana kwimithombo yehlabathi inokuba luncedo kodwa ke ufanele uyilumkele. Abantu abangamkhonziyo uYehova basenokuzama ukukuphembelela ukuba uthande ihlabathi. (1 Yoh. 2:15-17) Ukuba ujonga izinto onokuzifumana ehlabathini, intliziyo yakho inokukukhohlisa lula.—Funda iMizekeliso 14:15; Yer. 17:9.
15, 16. Ngubani onokukunika icebiso lobulumko ngokuphathelele umsebenzi?
15 Xa ukhetha umsebenzi kufuneka ufumane icebiso lobulumko. (IMize. 1:5) Ngubani onokukunceda ukhethe ngokuvisisana nemigaqo yeBhayibhile? Phulaphula abantu abamthandayo uYehova, abathanda wena, nabayaziyo imeko yakho. Baya kukunceda ucingisise ngezinto onokukwazi ukuzenza. Amacebiso abo anokukunceda ucingisise ngeyona nto ufuna ukuyenza. Ukuba unabazali abamthandayo uYehova, baya kukunceda. Nabadala bebandla lakho banokukunika amacebiso aluncedo. Ukongezelela, usenokuthetha noovulindlela nabaveleli abahambahambayo. Yintoni eyabenza bakhetha inkonzo yexesha elizeleyo? Baba ngabo njani oovulindlela, ibe babezixhasa njani? Luluphi ulwaneliseko abaye balufumana entsimini?—IMize. 15:22.
16 Abantu abakwazi kakuhle baya kukunika icebiso lobulumko. Ngokomzekelo, masithi ufuna ukuyeka isikolo samabanga aphakamileyo kuba usonqena nje umsebenzi wesikolo. Umntu okuthandayo unokuziqonda iinjongo zakho aze akuncede ubone ukuba isikolo sinokukunceda unganikezeli lula ebomini, uphawu olungundoqo ukuba ufuna ukhonza uYehova ngomphefumlo uphela.—INdu. 141:5; IMize. 6:6-10.
17. Hlobo luni lomsebenzi esimele siluphephe?
17 Wonke umntu okhonza uYehova uza kujamelana neemeko ezinokwenza buthathaka ukholo lwakhe nezinokumenza amshiye uYehova. (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8) Eminye imisebenzi inokuba yingozi ngakumbi kukholo lwakho kuneminye. Ngaba bakhona abantu obaziyo kwindawo ohlala kuyo abaye “baphukelwa yinqanawa mayelana nokholo lwabo” ngenxa yokukhetha uhlobo oluthile lomsebenzi? (1 Tim. 1:19) Kuya kuba bubulumko ukuphepha nawuphi na umsebenzi onokwenzakalisa ubuhlobo bakho noYehova.—IMize. 22:3.
KONWABELE UKUBA NGUMKRISTU OSELULA
18, 19. Yintoni amele ayenze umntu ukuba akakabi nawo umnqweno wokukhonza uYehova?
18 Ukuba unomnqweno onyanisekileyo wokukhonza uYehova, wasebenzise amathuba akunika wona ngoku usemtsha. Yenza ukhetho oluya kukwenza ukunandiphe ukukhonza uYehova kula maxesha achulumancisayo.—INdu. 148:12, 13.
19 Kodwa ke, kuthekani ukuba akukabi nawo lo mnqweno wokukhonza uYehova? Qhubeka uzama ukomeleza ukholo lwakho. Emva kokuba umpostile uPawulos echaze imigudu yakhe yokuphila ubomi obuzisa iintsikelelo, wathi: “Ukuba ninolunye utyekelo lwengqondo, uThixo uya kunityhilela esi simo sengqondo singasentla. Noko ke, ngokwenqanaba esiye senza inkqubela ukusa kulo, masiqhubeke sihamba ngokulungeleleneyo kulo mzila mnye.” (Fil 3:15, 16) Khumbula ukuba uYehova uyakuthanda. Icebiso lakhe lelona libalaseleyo. Mvumele akuncede wenze esona sigqibo sifanelekileyo ngoku usemtsha.
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Januwari 2014